mmetụta Factory - China mmetụta Manufacturers, Suppliers
H2S Nchọpụta CLH100
Nọmba :dị: CLH100 ruru eru: Coal Mine Safety Certificate Explosion-proof Asambodo Nnyocha Asambodo Ngwa: Single H2S detector bụ intrinsically mma na mgbawa na-egosi na ngwá na e mere iji gbochie H2S. Single H2S detector bụ ọnụ ala dị ala, na-enweghị nkwụnye gas na-arụ ọrụ iji chebe ndị ọrụ site na ikpughe gas H2S dị egwu na ọnọdụ kachasị njọ. N'agbanyeghị ogo ya, otu ihe nchọpụta H2S gụnyere atụmatụ ndị a na-ahụkarị na ...
GWSD100-100 Mining okpomọkụ ma na iru mmiri Meter
Modeldị ihe atụ: GWSD100 / 100 Ngwa: GWSD100 / 100 Ngwuputa igwe na iru mmiri Meter nwere ike na-agbanwe ma na-akpaghị aka ịgbanwuo oghere Okpomọkụ na iru mmiri ka ọ bụrụ ọkọlọtọ eletriki wee nyefee ya na ngwaọrụ ndị dabara. Ọ nwere ike igosi ịta nke methane na ọnọdụ ma ọ nwere ọrụ nke mkpọtụ na-enweghị atụ na ọhụụ na-ahụ anya. Ọ nwere ike ijikọ na usoro nlekota oru, mmebi na ikuku ikuku gas mkpọchi. Ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke coal na Ngwuputa na-arụ ọrụ fac ...
GWD100 Mining okpomọkụ Meter
Dị ihe atụ: GWD100 Ngwa: GWD100 Mining Temperature Meter nwere ike na-agbanwe ma na-akpaghị aka gbanwee ala okpomọkụ n'ime ọkọlọtọ eletriki ọkọlọtọ wee nyefee ya na ngwaọrụ ndị dabara. Ọ nwere ike igosi ịta nke methane na ọnọdụ ma ọ nwere ọrụ nke mkpọtụ na-enweghị atụ na ọhụụ na-ahụ anya. Ọ nwere ike ijikọ na usoro nlekota oru, mmebi na ikuku ikuku gas mkpọchi. Ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke coal na Ngwuputa na-arụ ọrụ ihu, eletriki na n'ibu n'ọgba ...
GPD10 Ngwuputa Ngwuputa Ngwuputa GPD10
Nlereanya: GPD10 Akara: TOPSKY Ngwa: GPD10 Mining Ikike Nrụgide Meter nwere ike ịga n'ihu ma gbanwee na-akpaghị aka mgbatị dị iche iche dị na ọkọlọtọ eletriki ọkọlọtọ wee zipu ya na akụrụngwa kwekọrọ. Ọ nwere ike igosi ịta nke methane na ọnọdụ ma ọ nwere ọrụ nke mkpọtụ na-enweghị atụ na ọhụụ na-ahụ anya. Ọ nwere ike ijikọ na usoro nlekota oru, mmebi na ikuku ikuku gas mkpọchi. Ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke kol Ngwuputa na-arụ ọrụ ihu, e ...
Ngwuputa H2S mita GLH100
Ngwa: GLH100 H2S Meter nwere ike na-agbanwe ma na-akpaghị aka ịgbanwe ala oghere H2S n'ime akara eletriki ọkọlọtọ wee nyefee ya na ngwaọrụ ndị dabara. Ọ nwere ike igosi ịta nke methane na ọnọdụ ma ọ nwere ọrụ nke mkpọtụ na-enweghị atụ na ọhụụ na-ahụ anya. Ọ nwere ike ijikọ na usoro nlekota oru, mmebi na ikuku ikuku gas mkpọchi. Ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke coal na Ngwuputa na-arụ ọrụ ihu, eletriki na n'ibu n'ọgba ma laghachi ikuku ụzọ. K ...
Mining CO Mita GTH1000
Ngwa: N'iji ihe mmetụta electrochemical dị ogologo ndụ na ike oriri microcomputer na-achịkwa otu, ngosi LCD anọ, ọ bụghị naanị ụda na mkpuchi ọkụ, nsuso efu, akpaka azụ, ọrụ mkpuchi ọkụ n'okpuru, kamakwa ezi na ntụkwasị obi, ogologo ndụ ọrụ, obere olu, ìhè arọ, mfe Ọrụ, adaba mmezi, wdg a na ngwá ọtụtụ-eji ịdị adị nke flammable combustible Gas ngwakọta na-arụ ọrụ na gburugburu ebe obibi nọgidere tụọ ...
GYH25 Mining O2 mita
Nkọwapụta Mita maka nchọpụta o2, ngosipụta ngosipụta, nkwukọrịta mgbaàmà ogologo oge, ụda na mkpu ọkụ, mkpuchi infrared ime Ngwa Ngwa a na-etolite ọgbọ ọhụụ nwere ọgụgụ isi oxygen. Site na nrịbama ọkọlọtọ ọkọlọtọ, ọ nwere ike ịrụ ọrụ ọnụ ma ọ bụ ụdị usoro nlekota dị iche iche na ndị na-agbaji iji nyochaa nyocha nke Oxygen na gburugburu ebe ikuku gas na-agbawa agbawa na mgbawa. Ọ nwere ọrụ nke mmekọrịta dị ogologo ...
Infrared CH4 mita GJH4 (A)
Ngwa: GJH4 (A) Infrared CH4 Meter nwere ike na-agbanwe ma na-akpaghị aka ịgbanwee oghere CH4 dị n'ime akara eletriki ọkọlọtọ wee nyefee ya na ngwaọrụ ndị dabara. Ọ nwere ike igosi ịta nke methane na ọnọdụ ma ọ nwere ọrụ nke mkpọtụ na-enweghị atụ na ọhụụ na-ahụ anya. Ọ nwere ike ijikọ na usoro nlekota oru, mmebi na ikuku ikuku gas mkpọchi. Ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke coal na Ngwuputa na-arụ ọrụ ihu, eletriki na n'ibu n'ọgba ma laghachi ikuku ...
GRG5H Infrared Carbon Dioxide CO2 Ihe mmetụta
Dị ihe atụ: GRG5H Ahịa: TOPSKY Ngwa Dịka ikuku gas na-adị ngwa ngwa, mkpu na-enweghị atụ na njikwa ike njikwa. GRG5H Infrared carbon dioxide sensor Ngwaọrụ a nwere mkpebi, dịka gas na-etinye uche ozugbo, mkpuchi na-enweghị atụ na njikwa ike njikwa, njikwa akara ngosi infrared ime akara, nkwukọrịta dijitalụ, na ọrụ ndị ọzọ. Ngwaahịa a jiri mba ofesi na-abụghị dispersive infrared nchọpụta technology, merie p ...
GJC4 Obere Uche CH4 Mita
Model ： GJC4 Brand ： TOPSKY Specifications Sensor for low concenthane methane, on-spot ngosi, ogologo akara nkwukọrịta, ụda na ìhè mkpu, infrared remote Ngwa 1. Ngwaahịa a na-etolite ọgbọ ọhụrụ nke ọgụgụ isi methane nwere ọgụgụ isi. Na akara ngosipụta ọkọlọtọ. Ọ nwere ike ịrụkọ ọrụ ọnụ yana ụdị usoro nyocha dị iche iche na ndị na-emebi emebi iji nyochaa nyocha nke methane na gburugburu ebe ikuku gas na-agbawa agbawa na mgbawa. 3.Ọ ...